China Ezi Centri-Cleaner Centricleaner Maka Akwụkwọ pulp Machine ， Slag separator maka Akwụkwọ Mill factory na suppliers | YUNFENG
Ezi Centri-Cleaner Centricleaner Maka Akwụkwọ pulp Machine ， Slag Nkewa maka Akwụkwọ Mill
Obere ihe nhicha nke nhicha a Nke a na etinye ego kacha mma karia kaadiboodu, ihe eji ehicha kaadiboodu bu udiri ihe eji eme ihe iji wepu nsogbu di iche iche, foams, plastik na ihe ndi ozo. Ọ na ọtụtụ-eji maka emegharị pulp Ndinam na egg tree mmepụta akara. New ụdị arọ adịghị ọcha Cleaner The Arụ Ọcha Cleaner na-bụ-eji maka wepụ arọ adịghị dị ka gravel, scrap ígwè, ájá ...
Ngwa njupụta dị ala dị ala
Ndị ọchụnta ego a kachasị mma paịlị mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ, kaadiboodu paịpụ bụ ụdị ngwa ọrụ pulping nke a na-eji wepu obere nsogbu dị obere, ụfụfụ, plastik na na na akwụkwọ usoro pulp n'ichepụta. Ọ na ọtụtụ-eji maka emegharị pulp Ndinam na egg tree mmepụta akara.
Typedị nhicha ọhụrụ dị ọcha dị ọcha
A na-ejikarị nhicha Ọcha Dị Mkpa iji wepụ ihe adịghị ọcha dị ka gravel, ígwè na-ekpochapu, uzuzu na nnukwu ink dị iche iche site na ụdị mpempe akwụkwọ dị iche iche. nọmba nke cleaner.High nhicha arụmọrụ, nke na-ezere ìgwè ash ash na nke ikpeazụ ngalaba.High pụrụ ịdabere na-arụ ọrụ, agaghị egbochi.
Akwụkwọ nhicha nhicha ngwa Low njupụta Cleaner / Centri-Cleaner maka akwụkwọ na pulp na nkume igwe nri
450 ukwuu oru oma arọ Cleaner bụ usoro nke wepụ adịghị na slurry na-atụ centrifugal Cleaner ụkpụrụ. Dị mwepụ nke adịghị ọcha na slurry gravel, ígwè, uzuzu na ibu ink ahụ na ndị ọzọ dị iche iche slurry ọcha usoro. 400 arọ Cleaner nwere ike ikpokọta dị ka slurry dị iche iche ìhè Cleaner, iji nweta chọrọ ihicha mmetụta.
Zibo yunfeng ulo oru ceramik co., LTD
Isi oru nhazi
Otu ntinye: 450-480L / min
N'ime nrụgide plasma: O.2-0.4MPa
Nrụgide nrụgide. O.14-0.175MPa
N'ime oghere plasma: 0.6-2.5%
Otu-ogbo slagging olu ruru: 15-30% (ikwu ndepụta slurry eruba ọnụego)
YF500LF-Q multifunctional slag eliminator bụ ọhụrụ ụdị nke elu arụmọrụ slag eliminator nke mepụtara na ndabere nke elu uzu n'ụlọ na mba ọzọ. Ọ bụ onye na-ewepu slag na-aga n'ihu nke na-eji ụkpụrụ centrifugal iji wepụ adịghị ọcha na slurry.
Concentrationta nke slag siri ike anaghị adabere na njirimara slurry site na njikwa dị iche nke slag separator.
Ọdịdị nke usoro a bụ kọmpat, ọnụ ọgụgụ na ọnụọgụ nke slag separator na-ebelata.
Nkewa arụmọrụ bụ elu, na-arụ ọrụ ịta nwere ike ịbụ na- 3%, n'ime elu bụ ezigbo, na ọ dịghị mkpa n'ịwa ọgba aghara jikoro.
Adịghị ọcha ọdịnaya ke keadighi rarii slag dị elu na eriri ọnwụ dị obere.
Site na ịgbanye slag siri ike ma na-aga n'ihu ịgbanye slag na ọkwa niile, enweghị mgbochi na-adị n'oge ọrụ yana usu ahụ pere mpe.
Abụọ, njirimara YF500LF-Q multi-ọtọ slag remover
A. Ọdịdị nkewa
Cleaner maka gbawara n'etiti Ọdịdị, dum Cleaner nwere ike kere n'ime 3-4 ngalaba, mfe disassemble
B. Differentzọ dị iche iche nke slag orùrù
YF500LF-Q Cleaner nwere ike ịhọrọ ụzọ dị iche iche nke slag orù dị ka mkpa dị iche iche nke ndị ọrụ: ala n'usoro arọ adịghị, elu ahiri ọkụ adịghị, imeghari ka onye ọrụ na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi.
C, seramiiki eyi na-eguzogide slag mwepụ ọnụ
Akụkụ olu na ọnụ nke slags niile bụ ebe a na-agbakarị ọsọ ọsọ na iyi akwa.
Ala nke cone nke slag separator adopts seramiiki wear-eguzogide nozulu, nke ọ bụghị nanị na ana achi achi anụ slag orùrù ọnụego kamakwa prolongs ọrụ ndụ.
The ụlọ ọrụ dị ka dị iche iche slagging ụzọ na onye ọrụ dị iche iche mkpa na-enye ụdị dị iche iche, dị iche iche nkọwa nke seramiiki slagging ọnụ.
Isi teknụzụ arụ ọrụ nke YF500LF-Q multifunctional slag remover
Nanị otu: 450-480L / min
Oke nrụgide ọrụ: 4kg / cm²
Oke ịrụ ọrụ okpomọkụ: 70 Celsius
Nrụgide nrụgide dị n'etiti ntinye na ntaneti slurry: 1.6 ~ 2.0kg / cm²
Single ndepụta eruba: 435 ~ 480L / min
Kacha nta mma slurry mgbali: 0.1kg / cm²
Ntinye mmiri ntinye: ihe na-erughị 3%
Wayo mwepụ ájá ọnụego:> 90%
Lusgbapụ mmiri na-asọba: 20 ~ 60L / min
Anọ, bụ isi arụmọrụ uru
na - akwado teknụzụ dị ọcha
elu arụmọrụ, iji hụ na mmiri dị ọcha
obere mgbali dobe, belata usoro ike oriri
ndokwa dị kọmpat, belata mkpuchi mpaghara mpaghara
onye ọ bụla na-ekewapụ slag na nke si na plasma tube kwadebere ya na valvụ n'otu n'otu, belata oge nkwụsị, mee ka usoro ahụ dị ngwa na ntụkwasị obi dịkwuo elu.
mesikwuru naịlọn ihe ike
nwere ike ịhọrọ ụdị dị iche iche dịka mkpa dị iche iche, nkọwa dị iche iche nke seramiiki na-eguzogide slag ọnụ
họrọ ụdị ihapu dị iche iche
Ise, isi ihe gbasara ngwa
YF500LF-Q multi-ọrụ slag remover adabara echichi ọnọdụ
A. Mgbe ala ịta sieve na n'ihu nduku dị iche iche pulping usoro
B, tupu ọkụ slag Cleaner
C. Slurry eruba usoro n'ihu akwụkwọ igwe
2, ndị slag nwere ike ji mee ihe na-esonụ iche iche nke slurry nkwadebe usoro
A. imu usoro eriri
B. Chemical pulping usoro
C. Deinking usoro
Nke gara aga: Ndị na-ehichapụ ihe dị iche iche dị iche iche (wax, plastik, na osisi ndị ọzọ.)
Osote: Waste Akwụkwọ pulp ọcha Low njupụta Cleaner
Cleaner N'ihi Akwụkwọ pulp Ime
Akwụkwọ pulp Ime Equipment
Akwụkwọ pulp Ime Machinery
Pulp Cleaner N'ihi Akwụkwọ Ime Machine
Slag Nkewa maka Akwụkwọ Mill
Igwe anaghị agba nchara Cleaner cone N'ihi Akwụkwọ pulp Ime
Igwe anaghị agba nchara High njupụta Cleaner N'ihi Akwụkwọ pulp Ime